माघ १५ भित्र ऐन/कानून दिए जेठ पहिलो हप्ता निर्वाचन गर्न सकिन्छ : डा. यादव « Khasokhas Follow @khasokhasmag
माघ १५ भित्र ऐन/कानून दिए जेठ पहिलो हप्ता निर्वाचन गर्न सकिन्छ : डा. यादव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचन आयोगलाई ऐन/कानूनहरु दिएमात्रै जेठको पहिलो हप्ता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन्।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अब चैत्रमा चुनाव हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले थपे,‘अब चैत्रमा चुनावमा हुन सक्दैन्, बैशाख २८/२९ गते निर्वाचन सुरु गर्ने हो भने जेठको पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’ उनले आयोगले अहिले पूरानै ऐन तथा कानूनहरु अनुसार काम गरिरहेको समेत जनाए।